हर्क गुरुङ जो नेपालको वैज्ञानिक विकास र भूगोलको डाक्टर थिए – Kantipur Np
प्रकाशित मिति: बिहिबार, आश्विन ०७, २०७८ समय: ९:०८:०१
एकजना अनुभवी र जान्ने डाक्टरले बिरामी हेर्ने बित्तिकै प्रमुख रोग Aपत्ता लगाउँछ र बाँकी त्यसको निदान गर्ने तरिका बताउन सक्छ ।
त्यस्तै एकजना कुशल भूगोलविद् हुनुहुन्थ्यो डा. हर्क गुरुङ । एकजना यस्ता भूगोलविद् जो नेपालको वैज्ञानिक विकास र भूगोलको डाक्टर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले कोरेका सिमानाहरूमा कहिल्यै विवाद आएन ।
उहाँले देशभित्रको प्रत्येक नसाको निगरानी गर्न सक्नुहुन्थ्यो । प्रत्येक भू-भौतिक विभाजनको सही भू-उपयोग नीति र जनसङ्ख्याको उचित वितरण र अवसरहरूको फेहरिस्त राख्नुहुन्थ्यो ।
उहाँले नेपालको संघीयता सम्बन्धी खाका पनि कोर्नुभएको थियो र त्यसमा मैले पनि उहाँलाई सहयोग गरेको थिएँ । महेन्द्र सरकारबाट उतिबेला नेपालको विकास योजना समानुपातिक होस् भनेर तत्कालीन समयमा उपलब्ध अब्बल भूगोलविद् हर्क सरलाई उपयुक्त जिम्मेवारी प्राप्त भयो ।
लगत्तै उहाँले नेपालको वैज्ञानिक योजनाको शुरुआत गर्नुभयो । उहाँले जिल्ला, अञ्चल र विकास क्षेत्रको बलियो आधारस्तम्भ खडा गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभयो ।
विश्व वन्यजन्तु कोषको सल्लाहकार हुँदाहुँदै यो संसारबाट विदा हुनुभएका डा. हर्क गुरुङ, तपाईंलाई हामी भूगोलविद्हरूले आफ्नो संरक्षक मानेका थियौं र मानेका छौं। हामी सबै मिलेर आज नेपालको वन्यजन्तु, वन तथा वातावरण, जलवायु परिवर्तन, भू-जलाधार लगायत धेरै काम गर्दैछौं ।
नेपाल सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालय र विभिन्न संघसंस्थासँग हातेमालो गर्दै विश्व वन्यजन्तु कोषले नेपालको संरक्षण क्षेत्रमा विश्वमै अनुकरणीय र अद्वितीय काम गरेको छ। हाम्रा अग्रजहरूलाई निराश नहुने गरी काम गरेका छौं । सदासर्वदा गरिनै रहनेछौं ।
Last Updated on: September 23rd, 2021 at 9:08 am